စီဒေါဆိုသည်မှာ အမျိုးသမီးများအား နည်းမျိုးစုံဖြင့် ခွဲခြားမှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ ကွန်ဗင်းရှင်းဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းတွင် အမျိုးသမီးများ၏ လူ့အခွင့်အရေးအတွက် နိုင်ငံတကာမှ လက်ခံထားသည့် စံနှုန်းတစ်ခုကို ဖော်ပြထားပါသည်။ စီဒေါသည် တန်းတူညီမျှမှု၊ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကင်းမှုနှင့် နိုင်ငံတော် အစိုးရ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ စသည့် အဓိက စည်းမျဉ်းသုံးခုပေါ်တွင် အခြေခံထားပါသည်။ စီဒေါတွင် ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုနှင့် မိသားစုဆက်ဆံရေး၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု၊ နိုင်ငံရေး၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ဥပဒေရေးရာတို့တွင် တည်ရှိနေသည့် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေး ထားပါသည်။ စီဒေါတွင် အပိုဒ် ၁၆ ပိုဒ်ပါရှိပြီး ဖော်ပြပါ ကာတွန်းသည် အပိုဒ် ၄ ကို သရုပ်ဖော်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကာတွန်းကို Equality Myanmar မှ ပံ့ပိုးပေးထားပါသည်။ -------------------------- CEDAW stands for the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. It providesauniversal standard for women’s human rights and is based on three interrelated core principles: equality, non-discrimination and State obligation. CEDAW addresses discrimination in areas such as education, employment, marriage and family relations, health care, politics, finance and law. There are 16 articles in CEDAW. This cartoon illustrates the Article4and it is provided by Equality Myanmarr #GenderEquality -------------------------- စီဒေါဆိုသညျမှာ အမြိုးသမီးမြားအား နညျးမြိုးစုံဖွငျ့ ခှဲခွားမှုပပြောကျရေးဆိုငျရာ ကုလသမဂ်ဂ ကှနျဗငျးရှငျးဖွဈပါသညျ။ ၎င်းငျးတှငျ အမြိုးသမီးမြား၏ လူ့အခှငျ့အရေးအတှကျ နိုငျငံတကာမှ လကျခံထားသညျ့ စံနှုနျးတဈခုကို ဖျောပွထားပါသညျ။ စီဒေါသညျ တနျးတူညီမြှမှု၊ ခှဲခွားဆကျဆံခွငျးကငျးမှုနှငျ့ နိုငျငံတျော အစိုးရ၏ တာဝနျဝတ်တရားမြား စသညျ့ အဓိက စညျးမဉျြးသုံးခုပျေါတှငျ အခွခေံထားပါသညျ။ စီဒေါတှငျ ပညာရေး၊ အလုပျအကိုငျ၊ လကျထပျထိမျးမွားမှုနှငျ့ မိသားစုဆကျဆံရေး၊ ကနျြးမာရေး စောငျ့ရှောကျမှု၊ နိုငျငံရေး၊ ဘဏ်ဍာရေးနှငျ့ ဥပဒရေေးရာတို့တှငျ တညျရှိနသေညျ့ ခှဲခွားဆကျဆံမှုမြားကို ဖွရှေငျးဆောငျရှကျပေး ထားပါသညျ။ စီဒေါတှငျ အပိုဒျ ၁၆ ပိုဒျပါရှိပွီး ဖျောပွပါ ကာတှနျးသညျ အပိုဒျ ၄ ကို သရုပျဖျောထားခွငျးဖွဈပါသညျ။ ကာတှနျးကို Equality Myanmar မှ ပံ့ပိုးပေးထားပါသညျ။
We are seeking applications from qualified Myanmar nationals for the post of Area Office Assistant, G5, Duty Station – Sittwe. Please note UNDP can only accept applications received via the e-Recruitment system. To apply: https://jobs.partneragencies.net/erecruitjobs.html?JobOpeningId=18073 ----------------------- (Zawgyi) ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် (မြန်မာ) တွင် လစ်လပ်နေသော Area Office Assistant, G5, Duty Station – Sittwe နေရာကို အရည်အချင်းနှင့်ကိုက်ညီသော မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများ ၀င်ရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်ကို အောက်ဖော်ပြပါ ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင် ကြည့်ရှုပြီး ထိုဝက်ဘ်ဆိုက်မှ တဆင့် လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားရန် - https://jobs.partneragencies.net/erecruitjobs.html?JobOpeningId=18073 ----------------------- (Unicode) ကုလသမဂ်ဂဖှံ့ဖွိုးမှုအစီအစဉျ (မွနျမာ) တှငျ လဈလပျနသေော Area Office Assistant, G5, Duty Station – Sittwe နရောကို အရညျအခငျြးနှငျ့ကိုကျညီသော မွနျမာနိုငျငံသူ နိုငျငံသားမြား ဝငျရောကျ လြှောကျထားနိုငျပါသညျ။ အသေးစိတျ အခကျြအလကျကို အောကျဖျောပွပါ ဝကျဘျဆိုကျတှငျ ကွညျ့ရှုပွီး ထိုဝကျဘျဆိုကျမှ တဆငျ့ လြှောကျထားရမညျ ဖွဈပါသညျ။ လြှောကျထားရနျ - https://jobs.partneragencies.net/erecruitjobs.html?JobOpeningId=18073